ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Excellent ကမိတ်ဆက်ကမ်းလှမ်းမှုကို: ပထမဦးစွာသုံးမိနစ်အခမဲ့အထိ 1 မိနစ်တစ်မိနစ်လျှင် $ 30
"မကြာခဏ Flyer" type ကိုအစီအစဉ်ကို: ပုံမှန်ဖောက်သည်ဆုကြေးငွေမိနစ်ဝင်ငွေ
အကွံဉာဏျပေးကမ်းခြင်း၌အထူးနှင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် filter အကြံပေး
ဖုန်းကို 24 /7ကနေတဆင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသက်ရှင်ဖို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ
ယခုအချိန်တွင်မရနိုင်ပါ webcam ကနေတဆင့်န်ဆောင်မှုများ
နိဒါန်းကမ်းလှမ်းမှုကုန်ဆုံးပြီးနောက်အားလုံးအဘိဥာဏ်နှုန်းထားများထွက်ရှိဈေးအပေါဆုံးမပေးဖြစ်သောတစ်မိနစ်လျှင် $5ဖြစ်ကြ၏
ယခုအချိန်တွင်မရနိုင်ပါ E-mail ကိုအဘိဥာဏ်ဖတ်
ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် အခြား site တွေလို့ဆိုင်ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်လိုသူမဆိုအဘိဥာဏ်သို့မဟုတ် tarot စာဖတ်သူကိုယူမထားဘူး။ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်သူများသည်ထို့နောက်ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ကနှစ်ဦးကိုနမူနာဖတ်သွားတော်တစ်ခုလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရပေမည်။ ထိုမှသာသူတို့ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့ client များအတွက်အဘိဥာဏ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် tarot ဖတ်ပေးဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
သူတို့နေသမျှကာလပတ်လုံးတခြားဆိုဒ်များအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူတို့ငှားတဲ့သူနှင့်အတူကိုပိုမိုရွေးချယ်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်, သငျသညျအခွားသောဆိုဒ်များကဲ့သို့ကြီးမားသောတစ်ရွေးချယ်ရေးရေကူးကန်ကိုမတှေ့နိုငျသညျ။ သို့သော်အရေအတွက်ကျော်အရည်အသွေး, ညာဘက်?
တိုင်းအလားအလာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာမတိုင်မီစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင်ရဒါကြောင့်သင်ရိုးရှင်းစွာ system ကို filtering သူတို့ရဲ့မျိုးစုံစံသုံးပြီးအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော tarot ကတ်များသို့မဟုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်အဖြစ် tools တွေကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးဆင်းကိုအကျဉ်းချုံး။ သင်တစ်ဦးအလတ်စား, စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှု, ဒါမှမဟုတ်ပင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဘိဥာဏ်ကိုရှာဖွေနေပါသလား? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ရလဒ်များကို filter ။ တချို့ကအကြံပေးလည်းထိုကဲ့သို့သောကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်အချို့သောအကြောင်းအရာများအတွက်အထူးပြု။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် '' အဆင့်မြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းစျေးကွက်အရပျ၌ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီကိုအကောင်းဆုံးအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်မည်သည့်အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း site ၏အများဆုံးရက်ရက်ရောရောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်မူသောသင်တို့နိဒါန်းလျှော့စျေးအဖြစ်တစ်မိနစ်လျှင်သာ $ 30 များအတွက်ဟောပြောပွဲအချိန် 1 မိနစ်မှတက်မဝယ်နိုင်ပါ။ အတော်များများကအခြားသူများကိုများသောအားဖြင့်သင်လျှော့ချမှုနှုန်းမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်မိနစ်အပေါ်တစ်ဦးသိပ်နိမ့်အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မိတ်ဆက်စျေးနှုန်းကိုဆက်ကပ်။
သင့်ရဲ့ကနဦးလျှော့စျေးပြီးနောက်စာဖတ်နှုန်းကတစ်မိနစ်ကို $5ဖြစ်ကြသည်။ ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် ထို့အပြင်အသင်းဝင်အခွင့်အရေးကိုခေါ်ဖောက်သည်တစ်ဦးမက်လုံးပေးအစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အနည်းဆုံးအား 10 မိနစ်တစ်လလျှင်တိုင်း 10 ဖတ်ဘို့, သငျသညျတစ်လလျှင်အခမဲ့မိနစ် 15 အထိငါးအခမဲ့ဆုကြေးငွေမိနစ်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖုန်းဖြင့်အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုရွေးပါ, ဒါမှမဟုတ်သင်ပိုမိုသတိပညာတစ်ခုခုရှာနေလျှင်တစ်ခုအကြံပေးနှင့်အတူအွန်လိုင်း chat လို့ရပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် လက်ရှိတွင်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်ဘို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ထားတဲ့ကင်မရာစကားပြောခန်း, ပူဇော်မထားဘူး။ သူတို့ကအစကအီးမေးလ်အဘိဥာဏ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါဘူး။ သို့သျောလညျး, အီးမေးလ်ဖတ်အလွန်အဖြစ်ဝေးတုံ့ပြန်ချက်ပူဇော်သို့မဟုတ်အခြားအီးမေးလ်က session ကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲမေးခွန်းများကိုတက်အတိုင်းလိုက်နာမေးရန်စွမ်းရည်အဖြစ်ကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်။
အကြားအမြင်ရ profile များကိုသင်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဝယ်ယူမီအကြံပေး preview နိုင်အောင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်သူများ၏အသံသွင်းထားပြီလုပ်ပါ။
အများစုမှာအခြားအအဘိဥာဏ်န်ဆောင်မှုကိုသင်ချည်းပါပဲလျှင်သင့်အကောင့်မှခရက်ဒစ်ပူဇော်ပေမယ် ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် သငျသညျချင်ပါတယ်လျှင်အမှန်တကယ်ကိုယ်ငွေပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ထိုသို့သောစာဖတ်ခြင်း၏တနေ့အတွင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်အဖြစ်အနည်းငယ်လမ်းညွှန်ချက်များ, ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ သူတို့တစ်တွေအခမဲ့စာဖတ်ဘို့သင့်ကိုပြန်အမ်းနိုင်ဘူးကြောင့်လည်း, သင့်လတ်တလောပေးဆောင်စာဖတ်ခြင်းအဘို့ဖြစ်ရမည်။
သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးဖတ်တဦးနှင့်အတူမကျေနပ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အဘိဥာဏ်ကြိုးစားရန်အကောင့်အကြွေးရတဲ့စဉ်းစားပါ။ တခါတရံမှာအကြားအမြင်နှင့် tarot စာဖတ်သူများချိတ်ဆက်န်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါစေရန်ပျက်ကွက်။ ထိုကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအာမခံချက်နှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ငွေပြန်အမ်းငွေအဘို့အသွား၌ဘေးမရှိပါပဲ။
ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် သင့်ရဲ့နိဒါန်းလျှော့စျေးကုန်ဆုံးပြီးနောက်အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းများမှာအကြားအမြင်တစ်ဦးထက်ပိုသောအထက်တန်းလွှာရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း, သို့သော်သင်မပျော်ရွှင်လျှင်သူတို့ minute.And နှုန်း $ 1 မှာဝန်ဆောင်မှုစမ်းရန်သင့်အားမိနစ်တစ်ရက်ရက်ရောရောထောက်ပံ့ရေးပေးသင်အတင်းအကျပ်မရင့် အကြွေးခံယူပေမယ့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံပြန်အမ်းရနိုင်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစွန့်စားမှုလုံးဝနီးပါးရှိပါတယ်။
ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင် အခြား site တွေလို့ဆိုင်ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်လိုသူမဆိုအဘိဥာဏ်သို့မဟုတ် tarot စာဖတ်သူကိုယူမထားဘူး။ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်သူများသည်ထို့နောက်ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ကနှစ်ဦးကိုနမူနာဖတ်သွားတော်တစ်ခုလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရပေမည်။
အခမဲ့ MIN **
ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင်အသစ်ဖြစ်၏ကတည်းကသူတို့တစ်တွေအခမဲ့5မိနစ်စာဖတ်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ အခြား network များနှင့်မတူဘဲအဘယ်သူမျှမဝယ်ယူအခမဲ့စာဖတ်ခြင်းရရှိရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သင်ရုံတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ရှိသည်။ အဆိုပါ5မိနစ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအကြားအမြင်ပုံမှန်နှုန်းဖြင့်အပိုဆောင်းမိနစ်ယ်ယူနိုင်ပါသည်တက်သည်။